Ubuntu Desktop မှာ ဖိုင်တွေ ဖိုလ်ဒါတွေ မမြင်ရတော့လို့ပါ။ — MYSTERY ZILLION
Ubuntu Desktop မှာ ဖိုင်တွေ ဖိုလ်ဒါတွေ မမြင်ရတော့လို့ပါ။
ကျွန်တော် ဒီခေါင်းစဉ်အတွက်ရှာကြည့်ပါသေးတယ်။ မတွေ့လို့ ဒီမှာဘဲ ကိုယ်တိုင်မေးလိုက်တယ်။ ကျွန်တော့်စက်က folder
ကို open လုပ်ရင်လည်းမပွင့်လာတော့ဘူး။ ဥပမာ - external drive, flash drive , C: , ဖွင်ရင် ဖွင့်လိုတဲ့ box က မတက်လာဘူး။ ဒီတော့ အဲ့ drive ထဲက ဒေတာတွေကို ကျွန်တော်သုံးလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ နောက်ပီး Desktop မှာ သိမ်းထားတဲ့ folder တွေကိုကျတော့လည်း Desktop မှာသွားကြည့်ရင်မမြင်ရဘူး။ Desktop က ပြောင်ကြီးဘဲဖြစ်နေတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခြား path တွေကနေကြည့်ရင် Desktop မှာ ကိုယ်သိမ်းထားတဲ့ ဖိုင်တွေ ဖိုလ်ဒါတွေကိုမြင်ရတယ်။ Desktop မှာကြည့်ရင်ကျတော့မမြင်ရပါဘူး။ ဘာများဖြစ်နိုင်မလဲဗျ။ Google မှာလည်းမေးထားတယ်။ လိုချင်တဲ့ အဖြေမရလို့ပါ။
Can you support Screenshots?
မရဘူးအကို ။ Screenshots ဖမ်းရင် သိမ်းလို့မရဘူး။ Error တက်လာတယ်။ (((( Impossible to save the screenshot to file:///home/mskto/Pictures.
Error was GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.gnome.Nautilus was not provided by any .service files.
Please choose another location and retry. )))))) ဒါလေးပေါ်လာတယ်။ ဘယ်နေရာမှ​ြ သိမ်းသိမ်း ဒီ အယ်ရာဘဲပေါ်ပါတယ်။ နောက်ပီး ကျွန်တော့် ရဲ့ Ubuntu ညာဘက်ထောင့်နားမှာ နာရီ ၊ Empathy ၊ စသဖြင့် ဟာတွေဘာမှမရှိတော့ဘူး။ ပြောင်ရှင်းလေးဖြစ်နေပါတယ်။ Folder တစ်ခုဖွင့်ချင်ရင် Double Click နှိပ်ဖွင့်လို့မပေါ်ပါဘူး။ ဥပမာ - သီချင်းနားထောင်မယ်ဆို သီချင်းရှိတဲ့ Folder ကို တိုက်ရိုက်ဖွင့်ပြီးနားထောင်လို့မရပါဘူး။ အရင်ဆုံး Search Box ကနေ Music Player ကိုဖွင့်ရပါတယ်။ ပြီးမှ File ကနေ Music ရှိရာကို သွားရွေးပြီး ဖွင့်မှ နားထောင်လို့ရတယ်။ တစ်ခြား Applications တွေလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပါဘဲ။ အတတ်နိုင်ဆုံး နည်းလမ်းတွေလိုက်ရှာပြီးလုပ်ထားတယ်။ မတွေ့သေးဘူးဗျာ
Ubuntu Version ဘယ်လောက်လဲ Upgrade လုပ်ထားသလား လက်ရှိသုံးနေတဲ့ Desktop မှာ Theme ကဘာသုံးထားသလဲ အဲဒါတွေပြန်ကြည်ပေးပါ ဖြစ်တော့ မဖြစ်ဖူးဘူး ကြည့်ပေးမယ်။
Ubuntu 11.04 ပါ။ Upgrade တော့ မလုပ်ထားဘူး အကို။ Desktop မှာ Theme ကို Mac4lin သုံးထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုတော့ အဲ့တာက အလုပ်မလုပ်တော့ပါဘူး။ အရင် Ubuntu ရဲ့ Theme Style ဘဲပြန်ဖြစ်နေပါတယ်။
အင်း Theme ကြောင့်လို့ထင်လို့ ဘာသုံးသလဲမေးတာပါ အခုက Default ပေါ်နေပေမယ့် Manually သွားပြီးတော့ Theme ကို Default ဒါမှမဟုတ် တစ်ခြားတစ်ခုခုပြောင်းကြည့်ပြီး ပြန်စမ်းကြည့်ပါဉီး မရသေးဘူးဆိုရင် Ubuntu Tweak သွင်းလိုက်ပါ ပြီးရင် အဲဒီအထဲက Tweak -> System -> File Manager အောက်က Setting တွေကိုကြည့်ပါ အဲဒီ့အထဲမှာ Auto Mount တို့ တစ်ခြား Setting တွေရှိပါလိမ့်မယ် အဲဒါတွေဘယ်လိုရှိသလဲကြည့် ပြောင်းစမ်းကြည့်ပါ Ubuntu Tweak ထဲမှာလည်း Theme ကိုချိန်းလို့ရပါတယ် အရင်ဆုံးကတော့ Theme ကိုပြောင်းစမ်းပါ ပြောင်းပြီးရင်တော့ Reboot လည်း လိုရမယ်ရလုပ်ကြည့်ပါ။
ဟုတ်ကဲ့ အကို။ ကျွန်တော်ပြောဖို့ မေ့သွားလို့။ ကျွန်တော် Theme ကို Default ပြောင်းစမ်းကြည့်ပါတယ်။ စပြောင်းစမ်းတုန်းက ပေါ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း Reboot ပေးလိုက်တော့ ဘာမှမမြင်ရတော့တာပါ။ အခုတော့ Ubuntu Tweak သွင်းပြီး စမ်းကြည့်လိုက်ပါအုန်းမယ်။
အားလုံးအဆင်ပြေသွားပါပီ။ ကျွန်တော် က upgrade လုပ်လိုက်တော့ အကုန်ပြန်ပေါ်ပါပီ။